Mila manamarina ny DNS an-toerana mampiasa Host ao amin'ny OSX? | Martech Zone
Mila manamarina ny DNS an-toerana mampiasa Host ao amin'ny OSX?
Alakamisy Febroary 21, 2019 Zoma, Febroary 22, 2019 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifako namindra ny tranokalany tamina kaonty fampiantranoana marobe. Nohavaozin'izy ireo ny fikirakiran'ny DNS ho an'ny rakitsoratra A sy CNAME saingy sahirana izy ireo mamantatra raha toa ka mivaha amin'ny kaonty fampiantranoana vaovao (adiresy IP vaovao) ny tranokala na tsia.
Misy zavatra vitsivitsy tsy tokony ho adino rehefa manadio DNS. Fahatakarana ny fomba fiasan'ny DNS, ny fahazoana ny fomba fiasan'ny Registrar Domain anao, ary avy eo ny fahatakarana ny fomba fitantanan'ny mpampiantrano anao ny fidirany domain.
Ahoana ny fomba fiasan'ny DNS
Rehefa manoratra domaine amin'ny browser ianao:
Nojerena amin'ny Internet ilay sehatra mpizara anarana hametrahana ny toerana tokony handefasana ny fangatahana.
Raha misy fangatahana habaka tranonkala (http) dia hisy mpizara anarana mamerina ny adiresy IP amin'ny solosainao.
Ny solosainanao dia mitahiry an'io eo an-toerana, fantatra amin'ny anarana hoe anao DNS Cache.
Ny fangatahana dia alefa any amin'ny mpampiantrano, izay manitsy ny fangatahana anatiny ary manolotra ny tranokalanao.
Ahoana ny fiasan'ny registrar domain anao
Fanamarihana iray momba an'ity… tsy ny registrer domain rehetra no mitantana ny DNS anao. Manana mpanjifa iray aho, ohatra, izay manoratra ny fonenany amin'ny alàlan'ny Yahoo! Yahoo! Tsy mitantana ny sehatra na dia hita ao amin'ny fitantanan'izy ireo aza izany. Mpivarotra fotsiny izy ireo Tucows. Vokatr'izany, rehefa manova ny fikiranao DNS ao amin'ny Yahoo ianao !, mety maharitra ora maromaro vao tena havaozina ao amin'ny tena registrar domain.
Rehefa nohavaozina ny fikirakiran'ny DNS anao dia ampiakarina amin'ny serivisy maromaro amin'ny Internet izy ireo. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana, ity dia ara-bakiteny fotsiny dia maharitra segondra vitsy vao hitranga. Izany no antony iray handoavan'ny olona vola DNS tantanana. Ny orinasan'ny DNS tantanana dia mazàna ny redundancy ary haingana dia haingana… matetika haingana kokoa noho ny registrar domain anao.
Vantany vao havaozina ny mpizara Internet, amin'ny fotoana hafa anaovan'ny rafitranao fangatahana DNS, haverina ny adiresy IP misy ny tranokalanao. FANAMARIHANA: Ataovy ao an-tsaina fa nilaza aho fa amin'ny manaraka ny rafitrao no mangataka. Raha nangataka an'io sehatra io ianao teo aloha, dia mety havaozina ny Internet saingy ny rafitra misy eo an-toerana dia mety mamaha adiresy IP taloha mifototra amin'ny DNS Cache anao.
Ny fomba fiasan'ny DNS Host anao
Ny adiresy IP izay naverina sy nafindran'ny rafitra misy anao dia tsy tokana amin'ny tranokala tokana. Ny mpampiantrano iray dia mety manana tranokala ampolony na an-jatony maro aza hampiantranoana amin'ny adiresy IP tokana (matetika mpizara na mpizara virtoaly). Noho izany, rehefa angatahina amin'ny adiresy IP ny fonenanao, dia ampitain'ny mpampiantrano anao ny fangatahanao amin'ny toerana fampirimana manokana ao anatin'ny mpizara ary asehoy ny pejinao.
Ahoana no hamahana ny olana amin'ny DNS
Satria misy rafitra telo eto, misy ihany koa rafitra telo hamahana olana! Voalohany, mila mijery fotsiny ny rafitra eo an-toerana ianao hahitanao hoe aiza no tondroin'ny adiresy IP ao amin'ny rafitrao:
Vita mora izany amin'ny alàlan'ny fanokafana ny varavarankely Terminal sy ny fanoratana:
Na afaka manao fizahana mpizara anarana manokana ianao:
Raha nohavaozinao ny fisoratana DNS ao amin'ny registrar domain anao, dia ho azonao antoka fa voadio ny cache DNS anao ary te-hangataka indray ianao. Hanadio ny cache DNS anao amin'ny OSX:
Azonao atao ny mamerina manandrana ny Ping or nslookup hijerena raha toa ka mivaha adiresy IP vaovao ny sehatra amin'izao fotoana izao.
Ny dingana manaraka dia ny hijerena raha nohavaozina ireo mpizara internets DNS. Ataovy DNSstuff mety ho an'ity, azonao atao ny mahazo DNSreport feno amin'ny alàlan'ny sehatr'izy ireo izay tena tsara. Flywheel manana DNS Checker tsara ao amin'ny sehatra anaovany ny fangatahana Google, OpenDNS, Fortalnet, ary Probe Networks hijerena raha niparitaka araka ny tokony ho izy ny tranokalanao manodidina ny tranonkala.
Raha mahita ny adiresy IP aseho tsara amin'ny tranonkala ianao ary mbola tsy miseho ny tranokalanao, azonao atao ihany koa ny mandingana ireo mpizara amin'ny Internet ary miteny amin'ny rafitrao mba handefasana mivantana ny fangatahana amin'ny adiresy IP. Azonao atao ny manatanteraka izany amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny rakitrao mpampiantrano sy ny famoahana ny DNS. Mba hanaovana izany, sokafy ny Terminal ary soraty:
Ampidiro ny tenimiafinao rafitra ary tsindrio enter. Izay dia hitondra ny rakitra mivantana ao amin'ny Terminal ho fanovana. Afindra ny kursor amin'ny alàlan'ny zana-tsipìkanao ary ampio tsipika vaovao miaraka amin'ny adiresy IP arahin'ny anarana domain.
Raha tehirizina ilay rakitra dia tsindrio fanaraha-maso-o amin'ny keyboard-nao dia miverina handray ny filename. Mivoaha ny tonian-dahatsoratra amin'ny fanindriana fanaraha-maso-X, izay hamerina anao amin'ny tsipika baiko. Aza adino ny mampidina ny cache. Raha tsy mandeha tsara ilay tranokala, mety hisy olana eo an-toerana amin'ny mpampiantrano anao ary tokony hifandray amin'izy ireo ianao ary hampahafantaro azy ireo.
Fanamarihana farany… aza adino ny mamerina ny rakitra host anao amin'ny kinova voalohany. Tsy te hamela fidirana ao ianao fa te hanavao azy ho azy!
Tamin'ny fanarahana ireo dingana ireo dia afaka nanamarina aho fa ny fidirako DNS ao amin'ny registrar dia vaovao, ny fidirana DNS amin'ny Internet dia daty, ny cache DNS an'ny Mac ahy dia vaovao, ary ny DNS an'ny host web hatramin'izao… tsara ny mandeha!
Tags: Tompon'ny maro,Ping